Ego ole ka SEO Na-efu? | Martech Zone
SEOmoz weputara data site na ụlọ ọrụ 600 na-eme SEO maka ndị ahịa ha. AYTM were data ma tinye ya n'ime ihe omuma, Ego ole ka SEO Na-efu?.
Otu njem nke dị ịrịba ama ịhụ:
Ndị ndụmọdụ / ụlọ ọrụ dị ọcha nke “SEO” nwere ike ịpụ n'anya dị ka ụlọ ọrụ ọrụ “inbound marketing” (na-enye SEO, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọdịnaya, ntụgharị, nchịkọta, wdg) bilie. Ihe ngosi ahụ gosipụtara ndị zaghachiri 150 (25%) na-ekwu na ha lekwasịrị anya na SEO ebe ọnụọgụ ka ukwuu, 160 (26.7%), nyere ọkwa sara mbara.
Nke a dị mma ịhụ. N'uche nke m, inbound ahịa ụlọ ọrụ rụọ ọrụ ka mma na ịdụ ndị ahịa ọdụ na njikarịcha njin ọchụchọ n'ihi na ha sitere na nsonaazụ azụmaahịa karịa ogo dabeere na ya. Ilekwasị anya n'ọkwá naanị nwere ike ibute ọtụtụ nsogbu… gụnyere ọchịchọ ịdabere na backlinking, na-aghọtaghị ndị na-ege ntị, na ilekwasị anya na isiokwu dị elu karịa obere olu, mkpụrụ okwu ntụgharị dị elu.
Tags: atymonu seoego ole seo na-efuinbound ahịa ụlọ ọrụego nke seoAseomoz
Aka ekpe na aka nri Brained Marketers